प्रियंका र आयुष्मानको खुल्लम खुल्ला प्यार, किन भयो चुम्मा गर्नै हतार ? « Ramailo छ
प्रियंका र आयुष्मानको खुल्लम खुल्ला प्यार, किन भयो चुम्मा गर्नै हतार ?
प्रकाशित मिति : Jun 19, 2017
समय : 11:21 am
नायिका प्रियंका कार्की र नायक आयुष्मान देशराज जोशी बिचको प्यार अब सिमित घेरा भित्र मात्रै रहेन । उनीहरुको प्रेम क्लबदेखि अवार्ड समारोहसम्म पोखिन थालेको छ । खुल्लम खुल्ला रुपमा प्रेम गरिरहेका प्रियंका र आयुष्मानले शनिबार सम्पन्न एनएफडिसी अवार्डमा पनि खुला रुपमा प्रेम पोखे ।
फिल्म ‘चपली हाइट २’ बाट उत्कृष्ट नव नायकको अवार्ड पाएका आयुष्मान देशराज जोशीले स्टेजबाटै आफ्नो परिवार सहित प्रेमीका प्रियंका कार्की र उनकी आमालाई धन्यवाद दिए । प्रियंकाले ‘छक्का पञ्जा’ बाट नायिका प्रियंका कार्कीले उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड पाउँदा उनलाई जुरुक्क उचालेर गालामा चुम्मा दिए । प्रियंका र आयुष्मानको यो दृश्य हेर्न लायकको थियो । यसरी ‘खुल्लम खुल्ला रुपमा प्यार’ गरिरहेका प्रियंका र आयुष्मानको प्रेमको गन्तव्य चाहिं कहाँ सम्म होला त ?